Fananganana bobongolo, lanja maivana.
Saron'ny sofina azo esorina.
Fitsipika fanarahana CE EN1077.
Karazana vokatra fiarovan-doha
Laharana maodely V09
TECHNOLOGY fiarovan-doha amin'ny bobongolo
Fanamarinana CE EN0177
endri-javatra maivana, azo esorina ny tadin'ny sofina, ny vavahady manatsara
Rafitra mety PA66
Ity satroka oram-panala ity dia mipoitra amin'ny endrika madio sy azo ampiasaina amin'ny siny fitetezana mahazatra - fa mitondra fanavaozana ara-teknika koa eo amin'ny latabatra. Ny fanamboarana ny volon-doha amin'ny fiarovan-doha dia mitazona azy ho maivana, ary ny tadin'ny sofina azo esorina sy ny valizy fampiononana mifanentana dia mamela anao hihazakazaka ny fanamboarana tianao ihany.
Ny fomba kanto sy ny fampisehoana amin'ny satroka fiarovan-tena misy valiny, ny sytem gradient dia manome ny mety indrindra eto an-tany. Ny famitana farany voafaritra tsara dia mahatonga ny mpanao ski ho lasa kintana amin'ny oram-panala.
Ny fenitra ekena manerantany EN1077 ekena manerantany, Helmets ho an'ny mpanao ski Alpine ary ho an'ireo mpanao snowboard.
Teo aloha: Snowboard Helmet V02
Manaraka: Snow Helmet V06
Helmet Snowboard tsara indrindra
Helmetera Snowboard elektrika
Helmona Snowboard maivana
Ny fiarovan-doha Snowboard misy naoty ambony
Ski Helmet sy Kids V01Kid